ဟန်းဂုရွာ: ၃-နှစ်ဗီဇာ (ဗီဇာကြီး) ကုန်ခါနီး အီးနိုင်းကိုကိုများ သတိထား
ဗီဇာကြီး နှင့် နောက်တိုးဗီဇာ
ကိုရီးယားမှာ အီးနိုင်း(E-9)ဗီဇာကိုင်ဆောင်ထားကြတဲ့ အီးပီလုပ်သားများရဲ့ ဗီဇာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၊ နည်းနည်းပြောစရာရှိလာလို့ သည်ဆောင်းပါးကိုရေးဖြစ်ပါတယ် ။ အီးနိုင်းဗီဇာကို ထပ်ပြီးခွဲမယ်ဆိုလျင် ၊ မူလပထမ ပေးထားတဲ့ ၃-နှစ် ဗီဇာရှိတယ် ။ အဲဒါကိုတော့ ဗီဇာကြီးလို့ ကျနော်သုံးပါမယ် ။ အလုပ်ရှင်က ကြိုက်လို့ ၃-နှစ်ပြီးတော့ ၊ ၁-နှစ်နှင့် ၁၀-လ ထပ်တိုးခွင့်ရတဲ့ ဗီဇာကိုတော့ နောက်တိုးဗီဇာ(Re-employment Visa) လို့ခေါ်ချင်ပါတယ် ။ ကြားကာလမှာ တိုးတဲ့ဗီဇာ ၊ ရတဲ့ဗီဇာကိုတော့ ဗီဇာလေးလို့ခေါ်ပါမယ် ။ အလုပ်ပြောင်းရွှေ့ကာလမှာ တိုးပေးတဲ့ ၃-လဗီဇာကိုတော့ အလုပ်ရှာဗီဇာ သို့မဟုတ် အလုပ်ဂိန်ဗီဇာလို့ ခေါ်ပါမယ် ။
မကြာသေးခင်က အီးပီညီငယ်တစ်ယောက် မအိုချင်ဘဲ အိုသွားခဲ့ရပါတယ် ။ အင်မတန်မှ ကြိုးစားတဲ့ သူပါ ။ ကိုရီးယားစာ (ကိုရီးယားစကား)ကိုလည်း ကြိုးစားသင်ယူနေသလို ၊ အလုပ်ကိုလည်း အင်မတန်ကြိုးစားတဲ့ သူပါ ။ သူဌေးကလည်း ကြိုက်မှကြိုက် ။ ဒါပေမယ့် ၃-နှစ်ဗီဇာကြီးကုန်လို့ နောက်တိုးဗီဇာ လျှောက်တော့ ပြဿနာတက်ပါတယ် ။
ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ခိုင်းစေခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ၊ အလုပ်ရှင်တွေ လိုက်နာရတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေလည်း အများကြီးပါ ။ ပထမဦးစွာ ကိုရီးယားသားများကို ဦးစားပေး ခေါ်ယူရပါတယ် ။ ကိုရီးယားသားများက လျှောက်ထားခြင်းမရှိမှသာ နိုင်ငံခြားသားများကို ငှားရမ်းခိုင်းစေခွင့် ရတာပါ ။ အဲသလို ခိုင်းစေခွင့်ရပေမယ့် ၊ စက်ရုံမှာ ရှိတဲ့ လူအင်အားအချိုးအစားအလိုက်သာ ခိုင်းစေခွင့်ရှိတာပါ ။ (ကိုရီးယားသား ဘယ်နှယောက်ရှိလျင် နိုင်ငံခြားသားဘယ်နှယောက်ထက်မပိုစေရဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။)
နောက်ပြီး ၊ နိုင်ငံခြားသားငှါးရမ်းခွင့်တားမြစ်ခံထားရတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေလည်း ရှိပါတယ် ။ ဥပမာ - တရားမဝင်နိုင်ငံခြားသားခိုင်းစေတာကိုသက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းမိ (သိ) သွားလို့ ၊ တားမြစ်ခံထားရတာမျိုး ။
အဲသည်ညီငယ်စက်ရုံကဖြစ်ပုံကတော့ ၊ သည်လိုပါ ။ မူလက စက်ရုံမှာ ကိုရီးယားအလုပ်သမားတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။ နောက်တော့ လူအင်အားလျှော့လိုက်ပါတယ် ။ ကိုရီးယားအလုပ်သမားတွေကို လျှော့လိုက်တာပါ ။ ခိုင်းကောင်းပြီး ဈေးပေါတဲ့ နိုင်ငံခြားသားများကိုချန်ထားတဲ့ သဘောပေါ့ခင်ဗျာ ။
အဲ ၊ ခုနက ညီငယ် ၃-နှစ်ဗီဇာကြီးကုန်ခါနီး ၁လနှင့် ၂ ရက်အလိုမှာ နောက်တိုးဗီဇာလျှောက်ဖို့သွားပါတယ် ။ အဲသည်မှာ စက်ရုံက နိုင်ငံခြားသား ငှါးရမ်းခွင့်ရ အချိုးအစားအရ ၊ အီးနိုင်း ညီငယ်ကို ထပ်မံငှါးရမ်းခွင့် မရတော့ပါဘူး ။ သည်တော့ အဲသည် ညီငယ် အလုပ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ လုပ်ရပါတော့တယ် ။ အလုပ်ကြိုးစားသူ ဆိုတော့ သူဌေးကလည်း တစ်ခြားသူဌေးနှင့် မိတ်ဆက်ပေးရှာပါတယ် ။ တစ်ခြားသူဌေးက စာချုပ်ချုပ်မယ် လုပ်တော့ ဗီဇာက ၂၈-ရက်ပဲကျန်ပါတော့တယ် ။
အဲသည်မှာ ပြဿနာအကြီးကြီးတက်ပါတော့တယ် ။ နောက်တိုးဗီဇာ လျှောက်ထားရာမှာ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေက ၊ တစ်ဆက်တည်းလုပ်လာတဲ့ စက်ရုံ အလုပ်ရုံမှာဆို ဗီဇာ မကုန်မှီ ၇-ရက်အလိုမှာ နောက်တိုးဗီဇာ လျှောက်လို့ရပေမယ့် ၊ ရုံပြောင်းမယ့် သူများအဖို့ နောက်ဆုံးစက်ရုံ အလုပ်ရုံဟာ အလုပ်စာချုပ် (ဗီဇာ) အနည်းဆုံး(၁)လ ရှိရမယ်ဆိုတော့ အဲဒီပုဒ်မနှင့် ညှိပြီး ၊ နောက်တိုးဗီဇာ လျှောက်ထားခွင့် ဆုံးရှုံးသွားပါ တော့တယ် ။
/외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 제18조의 2에 따라 국내에 신규 입국한 후 3년의 취업기간이 만료되는 외국인근로자에 대해 사용자의 요청이 있는 경우 해당 외국인근로자는 출국하지 않고도 1회에 한정하여 재취업기간연장이 가능합니다.(1년 10개월 한도)
• : 재고용 신청 대상 사용자는 동법 제8조 제4항에 따라 최초 입국하여 고용된 외국인근로자(E-9)와 고용종속 관계를 유지하고 있는 자.
• : 사용자가 법 법 제18조의 2에 따른 재고용 허가를 받으려면 취업활동기간 만료일 전의 근로계약기간이 1개월 이상인 외국인근로자를 대상으로 당해 근로자의 취업활동 기간만료일의 7일전까지 신청가능.
ဘကြီးပွဲလည်းမမှီ ၊ ထီးတင်ပွဲလည်းမမှီ
မြန်မာပြည်ပြန် ၊ အထူးစာမေးပွဲဖြေဖို့ဆိုရာမှာလည်း ၊ ကိုရီးယားမှာ အနည်းဆုံး ၄-နှစ် ၁၀လ နေပြီးသူများသာ ဖြေဆိုခွင့်ရှိတာမို့ ၊ အဲသည်စာမေးပွဲလည်း ဖြေဆိုခွင့်မရရှာပါဘူး ။
သည်လိုနှင့်ပဲ ၊ မအိုချင်ဘဲနှင့် အိုလိုက်ရပါသတဲ့ ။
၃-နှစ်ဗီဇာကြီး ကုန်ခါနီး အီးနိုင်းကိုကိုများ ၊ သတိရှိကြပါကုန် ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 9:54 PM
Labels: ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်း, မောင်းသတင်း